at 12:13 PM Labels: အချိုပွဲ
ချစ်မောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မ ခရီးကနေ စနေနေ့ညက ပြန်ရောက်ပါပြီနော်။ ခရီးစဉ် တစ်လျှောက်လုံးမှာ ပင်ပန်းခဲ့ပေမယ့် အစစအရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ အောင်မြင်ခဲ့လို့ ၀မ်းသားပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မ၀ါနဲ့ ညီမလေးမြရွက်ဝေတို့ကလည်း ကျွန်မကို လာပြီး အဖော်လုပ်ပေးကြတော့ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။ မ၀ါနဲ့ ညီမလေး မြရွက်ဝေတို့မှာ ချမ်းချမ်းစီးစီးထဲ လာကြရသေးတယ်။ တကယ့်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။ တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်နော်။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်မရဲ့ မောင်နှမတွေကို ပြည်ကြီးငါးကောက်ညှင်းသွပ်လေး လုပ်ကျွေးပါဦးမယ်နော်။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ပြည်ကြီးငါး (၅၀) ကျပ်သား၊ ကောက်ညှင်းဆန် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး (၂) လုံး၊ အုန်းနို့မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း (၅) ဇွန်း၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၃) ဇွန်း၊ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁) ဇွန်း တို့ပါနော်။ ပြီးတော့ သွားကြားထိုးတံလေးတွေကိုလည်း အသင့်ပြင်ထားပေးပါနော်။
ပထမဦးဆုံး ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေစင်အောင် ဆေးကြောပြီး ဇလုံတစ်လုံးထဲ ထည့်ကာ ရေနွေးနဲ့ စိမ်ပေးထားပါ။ ပြီးရင် ပြည်ကြီးငါးကို သန့်စင်အောင် ဆေးကြောရပါမယ်၊ အပြင်က အခွံတွေ ဖယ်ရှားပစ်ရသလို အတွင်းမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ မျက်လုံးတို့ကို ဖောက်ထုပ်ပစ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့မှ ပြည်ကြီးငါးတွေကို သံပုရာရည်လေးညှစ်၊ နယ်ထားပြီး နာရီဝက်လောက် ထားပေးပါနော်။ ပြီးရင်တော့ ငါးတွေကို သေချာသန့်စင်အောင် ဆေးပစ်ပြီး စကာထဲထည့်ပြီး ရေစစ်ပေးထားပါ။ ပြီးရင် ကောက်ညှင်းဆန်တွေကိုလည်း ရေထဲကနေ ဆယ်ယူပြီး ဇကာထဲ ထည့်ပေးပြီး ရေစစ်ပေးထားပါနော်။
ကောက်ညှင်းဆန်တွေကို ဇလုံတစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး အုန်းနို့မှုန့်ရယ်၊ သကြားရယ်၊ ဆားရယ်နဲ့ သမအောင် နယ်ပေးပါ။ ပြည်ကြီးငါးတွေကို ယူပြီး ပြည်ကြီးငါးရဲ့ ကိုယ်လုံးထဲကို ကောက်ညှင်းလေးတွေ ထည့်ပေးပါ။ ကောက်ညှင်းတွေကို အရမ်းကြီး ကြပ်အောင် မထည့်ရပါဘူး။ ကောက်ညှင်းကျက်ပြီး ပွလာမှာမို့လို့ ပြည်ကြီးငါးအရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး ကောက်ညှင်းကို ချင့်ချိန်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် ကောက်ညှင်းတွေ ထွက်ကျ မလာအောင် ကောက်ညှင်းထည့်ပြီးတဲ့ အပေါက်ကို သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ ပိတ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲ ပြည်ကြီးငါးတွေထဲကို ကောက်ညှင်းတွေထည့်ပြီး စီစီရီရီ ထည့်ပေးထားပါနော်။
အားလုံး အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ပြည်ကြီးငါးတွေကို ဒယ်အိုးထဲ စီစီရီရီထည့်ပေးပါ။ ကောက်ညှင်းကျက်ဖို့ လိုတဲ့အတွက် ရေထည့်ပြီး တည်ဖို့လိုပါတယ်။ ရေလည်းအခမ်း၊ အထဲက ကောက်ညှင်းလည်း အကျက်ဖြစ်စေဖို့အတွက် ရေကို ချင့်ချိန်ပြီးထည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒယ်အိုးအရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး ပြည်ကြီးငါး ဘယ်နှကောင်ဆန့်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်လည်း မူတည်တဲ့အတွက် ကျွန်မကတော့ ရေထည့်တာကို အလောမကြီးစေချင်ပါဘူး။ ကျွန်မကတော့ ပထမဦးဆုံး လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးစာ ရေကိုထည့်ပြီး မီးအသင့်အတင့်နဲ့ တည်ပါတယ်။ ငါးမိနစ်လောက် ကြာတဲ့အခါမှာ ပြည်ကြီးငါးတွေကို ဟိုဘက်ဒီဘက် လှန်ပေးပါတယ်။ မီးကို လျှော့ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ရေနဲ့ နူးအောင်တည်ပါတယ်နော်။ ရေလိုသေးမယ်ထင်ရင်တော့ ရေနွေးကို နည်းနည်းချင်းဆီ ထည့်ပေးပြီး တည်ပေးပါနော်။ ရေလည်း ခမ်းပြီးဆိုရင်တော့ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ ပြည်ကြီးငါး ကောက်ညှင်းအဆာသွပ်လေး ရပါပြီနော်။ အုန်းနို့နံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ ခပ်ဆိမ့်ဆိမ့်အရသာရှိပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ ဒီအတိုင်းပဲ စားလိုက်ကြတာ အချဉ်လေးတောင် မလုပ်လိုက်ရဘူး။ အချဉ်လေးနဲ့ စားချင်ရင်တော့ ပဲငံပြာရည် အကြည် ၃ ဇွန်း၊ ရှာလကာရည်အချဉ် ၁ဇွန်းခွဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူလေး ခြစ်ထည့်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလေး ပါးပါးလှီးထည့်ပြီး သုံးဆောင်ပါနော်။ ကြိုက်တတ်ရင်တော့ ဂျူးမြစ်လေးကိုက်လိုက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်လေး ကိုက်လိုက်လုပ်ပါနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ပြည်ကြီးငါး ကောက်ညှင်း အဆာသွပ်လေး ရပါပြီနော်။
PS : အဲ့ဒီပန်းကန်လေးက မ၀ါ လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပေါ့။ ကြွားတာ :P
လုလု March 18, 2009 at 12:15 PM
နော်တွေများတဲ့ မမ ...မမနော်လုလု (ခေါ်) လုလုနော် (ခေါ်) နော်နော်..နော်ပေါ့ နော်..ကွန်းမန့်ပေးသွားပါတယ်နော်.. ကျေးဇူးပါနော်..စာတွေရေးရင် နော်တွေ လျော့ရေးပါနော်..နော်
susan May 20, 2011 at 3:39 PM
To anonymous who left comment at september 1, why are u so rude? please be grateful that she is sharing the recipe with us. if u don't like the way she write ,don't come to her blog.this is her blog and she has rights to write whatever she wants to write